आइपीएलः एकै पारीमा सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने टप ३ क्रिकेटर – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः आसन्न इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) सुरु हुन अब धेरै समय छैन । आइपीएलको १३ औँ सिजन २९ मार्चदेखि सुरु हुँदैछ । आइपीएल २०२० को खेल तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तालिका अनुसार उद्घाटन म्याचमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किंग्स खेल्ने छन् । यी दुई टीमबीचको उद्घाटन म्याच २९ मार्चमा मुम्बईमा हुनेछ ।
विश्व क्रिकेटको सर्बाधिक लोकप्रिय लिग आइपीएलमा हरेक वर्ष विभिन्न कीर्तिमान बन्दै आएका छन् । विश्व क्रिकेटका स्टार खेलाडीको सहभागिता रहने भएकाले आइपीएल हेर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ । चौका–छक्काको वर्षा हुने यो लिगमा कयौं खेलाडीले विभिन्न उपलब्धि पनि हासिल गर्छन् । यसैबीच आज आइपीएलमा एकै इनिङ्समा धेरै छक्का प्रहार गर्ने टप ३ खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः
३. क्रिस गेलः रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी) मा आवद्ध गेलले २०१२ को आइपीएल सिजनमा दिल्ली डेयर डेविल्सविरुद्ध ६२ बलमा १२८ रनको शानदारी पारी खेलेका थिए । जसमा उनले ७ चौका र १३ छक्का प्रहार गरेका थिए । गेलकै विस्फोटक ब्याटिङका कारण आरसीबीले दिल्लीलाई २१६ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा दिल्लीले १९४ रन मात्र बनाउन सकेको थियो ।
२. ब्रेण्डन म्याक्लमः न्यूजिल्याण्ड क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान ब्रेण्डन म्याक्लमले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बाट खेल्दै आइपीएल केरियरको सुरुवात गरेका थिए । उनले आफ्नो पहिलो सिजनमै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर (आरसीबी) विरुद्ध आक्रामक पारी खेलेका थिए । म्याक्लमले पहिलो सिजनको पहिलो म्याचमै आरसीबीविरुद्ध ७३ बलमा २१६.४३ को ‘स्ट्राइक रेट’मा १५८ रनको पारी खेलेका थिए । यस पारीमा उनले १३ छक्का र १० चौका प्रहार गरेका थिए ।
म्याक्लमकै शानदार ब्याटिङमा उक्त म्याचमा केकेआरले २० ओभरमा २२२ रन बनाएको थियो । २२३ रनको विशाल लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको आरसीबी ८२ रनमै समेटिएको थियो । उक्त म्याचमा केकेआर १४० रनको फराकिलो अन्तरले विजयी भएको थियो ।
१. क्रिस गेलः आइपीएलमा एक म्याचको एक पारीमा सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने क्रिकेटरको कीर्तिमान गेलको नाममा छ । उनले यो कीर्तिमान २०१३ को आइपीएलमा बनाएका थिए । गेलले पूणे वारियर्सविरुद्ध ६६ बलमा १७ छक्का र १३ चौका प्रहार गर्दै १७५ रन बनाएका थिए । उनकै विस्फोटक ब्याटिङमा आरसीबीले पूणेलाई २६४ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा पूणे वारियर्सले १३३ रन मात्र बनाउन सकेको थियो ।
ट्याग्स: आइपीएल, क्रिस गेल, ब्रेण्डन म्याक्लम